Ingxoxo ye-ZBW Mediatalk mayelana ne-AfricArXiv kanye nokwehluka kwezilimi kwiSayensi - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-24th Septhemba 2019 I-24th Septhemba 2019
Ingxoxo elandelayo yashicilelwa ekuqaleni e zbw-mediatalk.eu futhi onamalayisense ngaphansi I-Creative Commons KA-4.0.
Ukukhuthaza ukungafihli lutho, ukufinyelela okuvulekile kanye nengxoxo emhlabeni jikelele ocwaningweni kubalulekile ukubhekana nezinselelo zasekhaya kanye nezinselelo zomhlaba wonke njengokushintsha kwesimo sezulu okuqhubekayo. Isayensi evulekile eyenziwayo ivumela ukwehluka okuningana emiphumeleni yocwaningo kanye nokuhlangana komphakathi wesayensi womhlaba. Sixoxe noJohanna Havemann noJustin Sègbédji Ahinon isayensi evulekile inganqoba kanjani izithiyo futhi iqinise imiphakathi yolwazi lomhlaba kanye neyasendaweni ngasikhathi sinye.
Besikhuluma noJohanna Hasmann noJustin Sègbédji Ahinon.
Izingxoxo-mpikiswano zaseNyakatho-Ningizimu nokubambisana kubaluleke kakhulu ekuthuthukisweni kwesayensi evulekile. I-AfricArXiv is incwadi eyakhiwe ngaphambi kokuphrinta esungulwe ukuvumela ososayensi base-Afrika ukushicilela imibhalo yabo yesandla ngezilimi eziningana zase-Afrika kufaka nesiNgisi. UJustin Sègbédji Ahinon noJohanna Hadmann bangamalungu ekomidi eliqondisa ukusebenza le-KiaArXiv futhi basitshele ukuthi kungani lokhu ithuba elihle emazweni asathuthuka ukusebenzisana nawo abacwaningi emhlabeni jikelele.
Ngabe yiziphi izinzuzo isayensi evulekile ezinayo ekubambisaneni kwamanye amazwe futhi yiziphi izinselelo ezisadinga ukusonjululwa?
Umnyakazo wesayensi ovulekile usuvele udala indlela esikhuluma ngayo ngemiphumela yocwaningo emhlabeni jikelele nakulesi sikhathi sedijithali. Umbono nomsebenzi wezesayensi evulekile akuyona into entsha kodwa konke kusho ngezindlela ezinhle zesayensi zonke ososayensi okufanele futhi ikakhulukazi abafuna ukuhambisana nazo. Okusha yingqikithi yedijithali esisebenza kuyo namuhla nesifiso sokulawula ukungalingani esizithola sinakho nabashicileli bezinkampani ezifundisayo abazikhokhisa imali ekhokhwayo yokuthumela izihloko bese kuthi kamuva bakwazi ukuthola izindatshana ezibuyekezwe ontanga ngemuva kokushicilelwa.
Okusafanele kusetshenzwe ngakho ukufakwa kwamaphimbo ezifundo ezivela ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba. Lokhu kubalulekile ukuze sikwazi ukwakha ingqalasizinda yomhlaba yemikhuba yesayensi evulekile engasebenzi nje kuphela kososayensi abakhethiwe baseYurophu nabaseNyakatho Melika kepha enikeza inkulumo yesayensi yomhlaba wonke ngokulinganayo kuzo zonke izifunda zomhlaba, izithiyo zolimi nezindlela zokuziphatha. Isayensi evulekile ingaba umthelela kulokho, kepha kudingeka simeme futhi sikhuthaze ababambe iqhaza abasemqoka kwezemfundo emhlabeni wonke kubandakanya oNgqongqoshe bezemfundo kuzwelonke, imizamo yokudla okuvulekile yokufinyelela okuvulekile nedatha evulekile nabanye ababambe iqhaza.
Ngabe yiziphi izinselelo ukucwaninga e-Afrika ezibhekana nakho?
Phakathi kwezinkinga eziphambili ababhekene nabaphenyi base-Afrika yilezo ezihlobene nezindleko zokufinyelela kokuqukethwe kumaphephabhuku anezinkomba, kanye nemikhawulo yesikhungo kokuqukethwe okunikezwe amaphephabhuku aseyunivesithi- noma izikhungo. Abaphenyi base-Afrika bake bazigxeka kaningi izithiyo ababhekana nazo ukuze bafinyelele kulwazi lwesayensi: amaphephabhuku ambalwa kanye nezindatshana azikhonjisiwe kwimininingwane ebalulekile futhi izindleko eziphakeme zokubhaliswa kwamaphephabhuku zibeka izithiyo zezezimali eziqotho.
Amaphephabhuku amaningi ase-Afrika awahlangabezani nezincomo nezidingo okufanele zibhalwe futhi zivezwe kumininingwane yemininingwane ephakeme yomhlaba wonke, efana UDAJ, I-Scopus or Iwebhu yeSayensi. Lokhu kuholela ekutheni okuqukethwe okukhiqizwe kulawa mazwe akunakufinyeleleka ngisho nakubantu abahlala lapho, ngoba bathembela kulwazi oluku-inthanethi ukuthola okuqukethwe kwezemfundo noma amaphepha. Eminye imigoqo efana nokushoda kwemali yocwaningo, ukufinyelela okulinganiselwe kokuqukethwe kwesayensi ngakho-ke kuthinta ikhwalithi yocwaningo olwenziwe ngabacwaningi base-Afrika kanye namathuba okubambisana abangaba nawo.
Ukuxhumana kwe-Intanethi kungenye yezingqinamba ezinkulu njengoba ihlala iphansi kakhulu kuzo zonke izifunda ezibanzi ezwenikazi.
Ngenxa yalokho, njengamanje kunokubandlulula komnikelo ovela kubacwaningi base-Afrika ekukhiqizeni isayensi yomhlaba wonke, ngenxa yokuntuleka kokubonakala kokuqukethwe okukhiqizwe kuleli kanye nezwekazi. Noma kunenqwaba yamapulatifomu esayensi nokushicilelwa okuningana, lokhu kungenzeka kungaziwa kahle noma akubonakali ngokwanele. Isayensi evulekile iyimoto ethembisayo yokunciphisa noma yokuqeda lokhu kuthatha isikhathi eside.
Kuleminyaka emithathu eyedlule, kuye kwavela izinsizakalo eziningi namapulatifomu anikezela ukubonakala okuningi nokuzibandakanya okuphezulu kososayensi base-Afrika emhlabeni jikelele, njengama-reprint amakhulu e-pan-African DICAMES (isixhumanisi ngolimi lwesiFulentshi) kanye I-AfricArXiv kanye namaphephabhuku okufinyelela avulekile aqonde ngqo ocwaningweni lwase-Afrika olufana Ukucwaninga Okuvulekile kwe-AAS futhi Isayensi yase-Afrika, vula izindlela zokufinyelela kanye namapulatifomu, ukubala abambalwa.
Isayensi evulekile ingakwazi - futhi isivele - iyiguqula ngokuphelele indlela ucwaningo nokuqukethwe kwesayensi okutholakala, kukhiqizwa futhi kusatshalaliswa kulo lonke elase-Afrika. Ngezinhlelo eziningi zokususa phansi nezinsizakalo ezenziwa online ezitholakala manje zihlangana njengengqalasizinda entsha yezemfundo emhlabeni jikelele futhi nakubabambe iqhaza base-Afrika. Okuqukethwe okukhiqizwe abacwaningi base-Afrika ngale ndlela kuzotholakala kalula kubantu kulelizwekazi. Ngemuva kwalokho, lokhu okuqukethwe kuzobonakala kakhulu emhlabeni wonke njengoba kwenziwa kutholakala ngemininingwane efana ne-BASE Search, Amamephu Wokwazi Okuvulekile kanye neGoogle Scholar. Isayensi evulekile nayo isho okuningi - futhi okulula kakhulu - amathuba abacwaningi base-Afrika ukusebenzisana nabanye abacwaningi ezwenikazi nakwamanye amazwe omhlaba.
Yini i-AfricArXiv futhi yini ekhethekile ngezinsizakalo zayo?
I-AfricaArXiv ingumthombo wedijithali wamahhala futhi ovulekile wedijithali yocwaningo ngaphakathi kanye ne-Afrika. Kuyingxenye yeqoqo lezindawo zokufinyelela ezivulekile ezinikwa yi Uhlaka lweSayensi evulekile (OSF) ukuphathwa kwephrojekthi okugcinwa yi Isikhungo se-Open Science.
Inhloso yethu eyinhloko ne-AfricArXiv ukwenza okuqukethwe kocwaningo okukhiqizwe e-Afrika kubonakale kakhulukazi. Ngaphezu kwalokho, kunezinye izinhloso eziningi esifisa ukuziphumeza, njengokukhuthaza ukusetshenziswa kwezilimi zasekhaya zase-Afrika kwisayensi, ukubopha amabanga phakathi kokuphuma kocwaningo lwe-anglophone, okudumisa umqondo wokushicilela ukufinyelela okuvulekile ezwenikazi lonke kanye egcizelela ukuhambisana kolwazi lomdabu nolwendabuko esimweni sokucwaninga ngenkathi ngasikhathi sinye evikela impahla ehlakaniphile ehlangene yabantu bomdabu.
Kuwebhusayithi yethu sihlanganisa izinsizakusebenza zokuqukethwe kocwaningo lwase-Afrika futhi sisebenzisana nezinye izikhungo zase-Afrika nezingezona ezase-Afrika kanye nezinhlelo ezinjenge Ipulatifomu yesayensi evulekile yase-Afrika, I-AfricaOSH, INASP / AuthorAid, I-TCC Africa, IGDORE, lo Vula iSayensi MOOC kanye nezitolo futhi amakhosombe anokuqukethwe kwase-Afrika.
Ihlelwe kanjani i-AfricArXiv?
Kusukela kwethulwa kwethu ngoJuni 2018 i-AfricArXiv iqhutshwa ngokuzinikela kuphela neqembu elincane labantu abazinikezele kanye nochwepheshe abanentshisekelo yokufaka isandla ohlelweni oluvulekile lwesayensi yezwekazi ezwenikazi. Kuqala eyasungulwa nguJustin Sègbédji Ahinon waseBenin noJohanna Hasmann, abazinze eJalimane, sithole ngeSocial Media ukwakha ithimba, ikomidi eliphethe kanye nabalandeli.
Sinezifundiswa eqenjini lethu eziphatha inqubo yokuhlolisisa yokuhambisa futhi zibheka ikhwalithi yocwaningo olwethuliwe kanye neqembu elincane elibhekele i-PR nokusebenzisana. Sizama ukufinyelela kubantu nasezikhungweni ezizosebenzisana ukuze sibambisane nabo futhi sifunde okuningi endleleni. Futhi sibamba iqhaza futhi wethule umsebenzi wethu ezingqungqutheleni zomhlaba wonke ezifanele e-Afrika naseYurophu.
Yini okuhlangenwe nakho kwakho ngaleplatifomu kuze kube manje?
Inkonzo yethu eyinhloko ukusingathwa kwezinto ezisetshenziswayo kanye nezinye izindlela zokukhishwa kocwaningo mhlawumbe ososayensi base-Afrika kepha nososayensi abangama-Afrika abacwaninga ngezihloko ezihlobene ne-Afrika. Sibala okufakiwe okungaphezulu kwama-60 okwamukelwayo kuze kube manje futhi - njengoba igama lisakazeka - lindela ukuthi le nombolo inyuke ngokuqinile ngokuhamba kwesikhathi. Impendulo esiyithola kuwebhusayithi yethu kanye nenqolobane ekhulayo ingu-100% omuhle ngakho kusigcina sikhuthazekile ukuqhubeka nokusebenza kukho. Sifuna amathuba okusika i-AfricArXiv ekukhuleni kwezezimali ukuze ibe nesisekelo esiqinile kwingqalasizinda ekhulayo ye-Open Science yezwekazi lase-Afrika
Isici solimi yinto esesisebenza kuyo namanje. Kuyavela ukuthi akukho lula ukuthi ababhali benze umzamo owengeziwe wokuhumusha imibhalo yabo noma lonke imibhalo yesandla ngolimi lwendawo lwase-Afrika, isiFulentshi noma isiNgisi ngaphezulu kokuhanjiswa kwabo ngolimi olulodwa. Ngaphezu kwalokho, izilimi eziningi zendabuko zase-Afrika ngomlomo - ngakho-ke kuzodingeka sengeze into elalelwayo ekubhokisini.
Sisanda kwethula esethu imephu exhumana lapho abantu bengabona khona ukuthi kulelizwekazi kwenziwa ucwaningo olwenziwe kuphi, ngababhali abavela kuzo izikhungo ezazibandakanyeke kulo. Ezinye izifundo beziqhutshwa nethimba lamanye amazwe yingakho ezinye izindlela zokuxhumana zifinyelela ezikhungweni zakwamanye amazwe omhlaba. Siphinde futhi sibeke imephu yezikhungo zokucwaninga zamazwe kanye nezikhungo ezingezona ezase-Afrika ngokugxila ezifundweni zase-Afrika, isibonelo eSweden naseNetherlands. Le mephu ebonakalayo ivumela ukubandakanyeka okudlalwayo ngesihloko nokuqukethwe kwethu endaweni egcinwe kuyo.
Imaphi amanye amathuba okunciphisa izithiyo zolimi?
Iminyaka yedijithali ayigcini ngokuhlinzeka ngamathuba amahle namathuba wesayensi evulekile kepha futhi nokuhunyushwa komshini sekuthuthuke ngezinga elikhulu eminyakeni emihlanu edlule. Izinsiza ze-inthanethi ezifana ukuhumusha nge-Google futhi DeepL yizinsuku zekhwalithi ephezulu ngokumangazayo. Kuliqiniso, abantu kusadingeka bahlole kabusha ukunemba kokuqukethwe kwalezo zilimi zombili, ikakhulukazi ngoba kuthinta imininingwane eminingi emincane nemfushane emibikweni yesayensi. Kukhona futhi nenketho yomkhakha omusha wezinsizakalo zabaqeqeshi ukuhumusha okuqukethwe kwesayensi.
Sinethemba elikhulu mayelana nobudala bedijithali kanye namathuba akuletha ezwenikazi lase-Afrika ukuba bakwazi ukusebenzisana kahle ezingeni lomhlaba jikelele futhi bathuthukise ucwaningo kanye nokwenza izinto ezintsha kanye nokuvumela ababambiqhaza base-Afrika ukuthi babambe iqhaza ekuxazululeni izinselelo ezinzima zomhlaba wonke obhekene nayo: ukuguquguquka kwesimo sezulu, izingxabano futhi ukufuduka. Ngaphandle kwalokho kufanele ukuthi ingxenye enkulu ibe mnandi ukwenza ucwaningo lwesifunda kanye nolwamanye amazwe, kungakhathalekile ukuthi iqembu lakho lisuselwe kuphi futhi isayensi evulekile ihlinzekela ukuthi, uma sakha ingqalasizinda yaso ngomzamo ohlanganisiwe.
Ukuphetha, sifuna ukugqamisa ithuba lokuthi abafundi bafunde futhi basayine amagama abo ku- "Izimiso Eziyishumi zase-Afrika Zokufinyelela Okuvulekile Kokuxhumana Kwabafundi" esikubhalile kanye nabanye ozakwethu.
Xhumanisa esihlokweni sokuqala: zbw-mediatalk.eu/2019/09/open-access-africarxiv-facilitates-nownow-exchange-between-africa-and-europe/
Categories:	Vula UkufinyelelaVula iSayensiIsandulelo
Izigaba Khetha Category Ukwakha amandla (1) Ukusebenzisana (5) I-COVID-19 (24) Umcimbi (2) Okujwayelekile (10) Ulwazi Lomdabu (1) Ukuhluka Kwezilimi (3) Ukufinyelela okuvulekile (16) Isayensi evulekile (11) Ukubuyekezwa kontanga (2) I-preprint (6) Ukushicilela (7) Ukuxhumana ngesayensi (9) Ukuhanjiswa (5)
Abahlanganyeli abakhulu kakhulu beDatha neCivic Technology Network abahlanganyeli abane-Continental Digital Archive Yezokucwaninga Kwesayensi ukuze Mitigate COVID-19
(Kwabiwe ekuqaleni eMiddleum / Code For Africa · imizuzu emi-5 ifundeka) Ngabe usayizi owodwa ulingana wonke? Ngabe i-Afrika, nezinhlelo zayo ezintekenteke zokunakekelwa kwempilo, kufanele kube khona izindawo ezinabantu abaningi kanye nezomnotho ezinkulu ezingekho emthethweni ezisebenzisa amasu ezomhlaba jikelele Funda kabanzi…
Yisho njengo: Hasmann, Jo, Bezuidenhout, Louise, Achampong, Joyce, Akligoh, Harry, Ayodele, Obasegun, Hussein, Shaukatali,… Wenzelmann, Victoria. (2020). Ukuhlanganisa ingqalasizinda ye-Open Science ukuthola izimpendulo ezisebenzayo zase-Afrika ku-COVID-19 [prerint]. doi.org/10.5281/zenodo.3733768 Ithimba Lababhali: Funda kabanzi…
Ababhali nabahlinzeki ngokulandelana kwezinhlamvuBezuidenhout, Louise, Hasmann, Jo, Khishi, Stephanie, De Mutiis, Anna, no-Owango, Joy. (2020). Amarekhodi Wokucwaninga Kwama-Digital Digital: Ukwenza Imephu I-Landscape [Idatha esethwe]. UZenodo. doi.org/10.5281/zenodo.3732172 Imephu ebonakalayo: https://kumu.io/access2perspectives/african-digital-research-repositories Dataset: https://tinyurl.com/African-Research-RepositoriesArchived at https: // info .africarxiv.org / african-digital-research-repositories / Submission Funda kabanzi…
QAPHELA, I-Praesent activis lectus ipsum elit.